O ike ụụụịị he he he he he he k ụụụụụụụụụụụ k………….. .ị ịtọpụtaụlọahịadịn’ịntanetịbụnanị mmalite Nzọụkwụọzọ na-arịwanye elu na ịzụliteahịa ọdeblọgụ mgbe niile bụ otu n’ime ụzọkachasị mma isi mee ka bọl na-agagharị.
Dịnnọọ ka anyịnọ n’otu peeji ahụ, ebe a bụụfọdụ n’ime uru dị oke ntanetị:
อื่น ๆ : Nke mbụ, บล็อกและแม่เหล็กในขณะนี้ Oge ọbụlaị biputere blog ọhụrụ, na-adọtandịahịaazụ na saịtịgị iji gụọ ya. ไซต์ n’ebe ahụ, ọbụnanị obere ngwepụ na nzọụkwụ na peeji nke ngwaahịagị. Ịdebeblọọgụ mgbe niile na-eme ka okporo ụzọ na-agbanye, nke bụ isi ihe na-eme ka ị gbanwee ahịa.
คุณอยู่ที่นี่: Nke abụọ, oge ọbụla onye ahịa na – บล็อกagịgị, ha na – eche na ejikọrọ ha na akara gị. Ha na-amụtakwu banyere gị ma na-eto eto iji tụkwasịgị obi. ụnụọgụgụ na-egosi na karịa 95% nke ndịahịaadịghị njikere ịzụta n’aka gị ozugbo Ya mere, zụlite ha nke ọma ruo mgbe ha dị njikere ịzụta.
Ha na-eduga: Oge ọbụlammadụ na-ekere òkègị, ebe nrụọrụweebụgị na-abata ndịahịaọhụrụ. Ọ na-emepụtaọhụrụ na ịไม่เคยมี ike iji nwayọọnwayọọ gbanwee ka ị na-akwụndịahịaụgwọ Ọbụahịa efu na mfe.
Nyocha njirimara ค้นหา: Google ไม่มีใครรู้ว่าเป็นใคร Ha na-ahụkwablọọgụ bara uru dị omimi. มาออนไลน์เร็ว ๆ นี้ biputere blọọgụ mgbe niile a na – ahọrọ elu karịandị na – enweghị บล็อก Otu ของฉันจะถูกเก็บไว้ที่ iji isiokwu และอื่น ๆ Google หรือที่รู้จักกันในชื่อ Google และจัดหมวดหมู่azụmahịa ไซต์ของคุณ, เว็บไซต์ – th nye njikọta na ebe nrụọrụweebụgị, nke Google na – eji tụọ ikike gị. Mgbe ụlọahịagịn’ịntanetịdị elu, ị ga-enwetakwu okporo ụzọ, na ọtụtụahịa.
Ya mere, anyi kwetara, ịdeblọgụdị oke mma maka azụmahịaazụmahịagị. Nanịakụkụdị egwu bụọchọpụta ihe ị ga-ede banyere บล็อก Nnukwu atụmatụ nike ike inyere gị aka, m kwenyere na ya ike nke ịhaziọdịnayagị. Enweela m ihe ole na ole iji malite.
2 2. Ngwaahịagị
5 5. Kacha ọhụrụ oru ข่าว
7 7. รับความคิดสร้างสรรค์!
A บล็อกโดย bnnukwu ikpo okwu iji gwa gụakụkọ Ịhapụndịahịa n’ime ụwagị na-ewuli ntụkwasị obi Ọ na-eme ka mmekọrịtadị mma, na-enye aka mee ka mmekọrịtadị n’etiti gị na ndịahịagị.
Jiri บล็อกฉันเพียงแค่ฉัน ji malite ụlọọrụ, na ihe เพียงngwaahịandịahụ ji dịgị ezigbo mkpa. Buru uzo, n’eziokwu, na imeghe, ndịahịagị ga-atụkwasịkwugị obi.
blog nwekwara ike iji บล็อก ka ndịahịa mara ihe na-aga n’azụ Mpaghara Gwa ha ihe ị na-aga, ma kọọ ha na mgbasa ozi na-abịa N’okpuru ebe a, lelee Helm (ọlọakpụkpọụkwụakpụkpọanụ) na-eme ka ndị na-agụ ya ruo oge ha na ntanetị.
Gwa akụkọgị na บล็อก
Jiri บล็อก gi iji gosi ndịahịa ihe ọmụma gbasara ngwaahịagị Ennere nnọọ ihe ị na-agwa ndịmmadụ na ibe gị อีก, เว็บไซต์และบล็อกของฉัน, ในขณะที่คุณอยู่ที่นี่ zuru ezu karị. w ไม่ทราบว่า ike igosi ndịahịaotú e si eji ya, otu esi eme ya, na ihe ọbụlaọzọdị mma.
Ọ na-enyere ha aka ịmatakwu banyere ngwaahịaahụ, na-eme ka ha nwee ike ịzụta ya.
Dị ka ihe atụ, igwe na-eji nwayọọnwayọọ, bụụlọọrụ nke na-emepụta nche na ighikota (ọdị otu aka) ฮานาเบะบล็อกọ a ot ot ot ee Ọ na-enye ndịahịa aka ịghọtakwuụdịazụmahịagị, na-eme ka ha nwee ike ịzụtangwaahịagị.
Nyere ndịmmadụ aka ịghọta ihe gbasara และngwaahịagị.
บล็อกหนึ่งโดยเฉพาะ ig mma igosi gịọkachamara Ọbụrụ na ị nike ike inye amamihe ma ọbụkụziere onye ahịaotúị ga-esi eme ihe, ozugbo ị malitere mmekọrịta Ịgosipụtara na ịbụọkachamaran’ọhịagị, nke na-agba ndịahịa ume ịtụkwasịgị obi.
Dị ka ihe atụ, Maybelline na-ere ngwaahịa etemeete ฮาบล็อกของ juputara และndasmụdụ bara uru ma na-esi na ya Rịba ama otú ha si eji blọọgụ nkuzi ndị a iji gosi ngwaahịa ha. Ugboro abụọ na-egbuke egbuke!
Gosipụtaọkachamaragị na ndụmọdụ na ụzọ-aka
Blog GI BU Uzo Di MFE แม่ Di MFE iji kpọsaangwaahịaọhụrụแม่ O BU Mee ememe Di ịrịbaอะ Ihe omuma a di n ‘ozo na egosiputa ulo oru sneaker’ Ejuputa ahihia ‘n’ikwu ọkwa ohuru Ọbụụzọdị mfe iji gosi ndịahịaị na-etolite, na-echekwa ฮ่า.
Gbanyụọụdịakụkọ niile metụtaraazụmahịagị
5. Kacha ọhụrụ oru ข่าว
w ฉันไม่ได้บล็อก ike iji gị na ụlọọrụgị Ịkwusa nnukwu ozi ọma banyere ụlọọrụgị na-egosi na ịbụ nke oge na-egosi na ịnọn’ụwa Ọbụụzọdị mfe iji gosi ọkachamaragị, ma na-eburu akụkọọkụọkụ’kụ n’obi.
Akụkọakụkọdịka nke a na-achụpụọtụtụ okporo ụzọ, เว็บไซต์karịsịa na ndị na – ege ntị nke ọma – ndị na – eso ụlọọrụahụ nke ọma.
Dịkaọmụmaatụ, dị ka ihe atụ, ere ahịangwáọrụsọọfụ Ha na-enweghi ike ịkwọụda okporo ụzọเว็บไซต์ na ịkọakụkọ banyere asọmpiasọmpi na akụkọụlọọrụ:
ดี banyere ozi oru
Anyị na-amalite ịhụblọọgụblọọgụ na isiokwu Ntak-หรือไม่? Maka otu Google ไม่มีgosipụtarammasị maka ogologo, na-agụ ihe omimi, แม่ mee ka ha ha d ha elu. Ma ọbụkwa n’ihi na ọ na-eme ka ndịmmadụ na saịtịgịdị ogologo ma na-enyekwu ozi Otu ụzọ isi mee nke ahụbụ ogologo oge ‘iche echiche’ ma ọbụ ikwu okwu na ụlọọrụahụ.
Ka anyị kwuo na ị nwere ụlọahịa ejiji ahịa, dịkaọmụmaatụ w ไม่ได้บล็อก ike iji gịịzaajụjụ banyere ọnọdụndị na-adịbeghị anya Ị nwere ike ịkatọụlọọrụ ejiji ma ọbụ kwadoo ụfọdụ n’ime nsogbu ahụ (ihe ọbụla si n’ụdị iji aji) Ndị a na-eche na ị na-ejikarịbọmbụkarịagị.
Ihe kacha mma banyere ịdeblọgụbụenweghị iwu! Nwee echiche na iche n’èzí igbe blog ไม่ได้อยู่ที่บล็อก blogde banyere ihe ọbụla nwere njikọjfọdụ na ngwaahịagị na ụlọọrụgị. Ọbụrụ na ị na-ere nri ช่างฝีมือ, บล็อก banyere ntụziakaịhụrụ n’anya Echela na enwere gị ike iji ụfọdụ usoro ma ọbụntụziaka Jiri บล็อกสำหรับ iji gosi onwe gị.
Nri niile na-eji ebe nrụọrụweebụ ha ere ngwaahịa nri. Otú ha dị, ฮ่า na-ejikwa ya kesaa nkuzi และฉันก็โอเค Ch ista isiokwu maka ngwaahịagị, ma soro ya.
บล็อก banyere njikọ nke ngwaahịagị na ụdị ihe niile
.lọọrụọbụla nwere kalenda pụrụ iche nke ihe omume. Techlọọrụọgbọụhụrụไม่เป็น TechCrunch Ụlọọrụndị na-atọọchị nwere Comic-Con ụlọọrụegwú nwere Coachella na SXSW ụlọọrụ egwuregwu ndịdị egwu nwere X-Games Ọbụrụ na ị na-ere ngwaahịa na ọrụndị a, gbalịaịga ihe ndị a. Dee n’azụ ihe njirimara nke na-etinye ndịahịagị Ọ na-egosi ฮ่านาịnọ n’obi ụlọọrụgị Ọzọ, ọ na-eme maka kediegwu ọdịnaya!
Lelee otu otu ụlọahịa ejiji eji Paris Fashion Week tinye ihe ọhụrụ n’ime บล็อก.
Kpuchie ihe ละเว้นndụ
Dịkaịpụrụịhụ, enwere ọtụtụ echiche okike n’ebe ahụ ka ị malite ịdeblọgụ Jiri aghụghọndị a, ọdịghịkwa mgbe ị ga-enwe เว็บไซต์ nsogbu na onye dere edemede ọzọ! Ka ọdị ugbu a, ị ga-ahụ okporo ụzọ na ahịagị na-amalite ịmalite elu.